खड्गप्रसादको कुम्भमेला निभ्ने बोलाको बत्ती हो : डा भट्टराई
2nd October, 2021 Sat ०९:५९:३५ मा प्रकाशित
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनलाई कुम्भ मेलाको संज्ञा दिँदै निम्ने बेलाको बत्ती भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘खड्गप्रसादको कुम्भमेला निभ्ने बेलाको बत्ती हो। लूटको धन फुपूको श्राद्ध गरेर सोझा जनतालाई केही समय भ्रममा पार्न सकिएला तर अन्तमा देशले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ’, उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन् ।
उनले नक्कली राष्ट्रवाद, नृजातीय अहंकारवाद, पपुलिज्म र व्यक्तिपूजाको ककटेलले अन्तः स्टालिन, हिटलर र फासीवाद जन्माउने बताए ।
शुक्रबारबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको ललितपुरमा भइरहेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा देशभरबाट ६ हजार प्रतिनिधि सहभागी रहेका छन् । भोलिसम्म चल्ने विधान महाधिवेशनमा आगामी पाँच वर्षका लागि एमालेको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दैछ ।
महाधिवेशन नीति तथा कार्यक्रमा बहस र छलफलफल भन्दा पनि अध्यक्ष ओलीको तारिफ र गुणगानमा बढि केन्द्रीत रहेको देखिन्छ । सडका दायाँबायाँ देखि पानीको बोत्तलसम्म ओलीको फोटाहरुले सजाइएको छ ।
Tags डा. बाबुराम भट्टराई नेकपा एमाले प्रथम विधान महाधिवशेन